The Ab Presents Nepal » काठमाडौमा डरलाग्दो भुकम्पपछी भारी बर्षा ! सचेत रहन आग्रह!
काठमाडौमा डरलाग्दो भुकम्पपछी भारी बर्षा ! सचेत रहन आग्रह!
काठमाडौं -: काठमाडौंमा भर्खरै भूकम्पको धक्का महशूस गरिएको छ । काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । भक्तपुर केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले अपरान्ह ४ बजेर १५ मिनेट जाँदा भक्तपुर केन्द्रबिन्दु भएर सो ‘भूकम्प गएको बताए ।
उनले सो भूकम्पको धक्का नयाँ नभएर ०७२ वैशाख १२ गतेको ‘भूकम्पकै पराकम्प भएको बताए । भूकम्पको धक्का भक्तपुरसहित काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे आसपासका जिल्लामा महसुस भएको बताइएको छ । भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस भएपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । भूकम्पसँगै वर्षा पनि शुरु भएको छ । आज मध्यान्हदेखि छिटपुट वर्षा भए पनि अहिले भूकम्प पश्चात भने काठमाडौँमा ठूलो वर्षा भैरहेको छ’ ।
भूकम्पकै पराकम्प भएको बताए । भूकम्पको धक्का भक्तपुरसहित काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे आसपासका जिल्लामा महसुस भएको बताइएको छ । ‘भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस भएपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । ‘भूकम्पसँगै वर्षा पनि शुरु भएको छ । आज मध्यान्हदेखि छिटपुट वर्षा भए पनि अहिले भूकम्प पश्चात भने काठमाडौँमा ठूलो वर्षा भैरहेको छ !